Allgedo.com » Al-shabaabka Baardheere oo Go’aano adag ka soo saarey Ganacsiga Qaadka iyo Cunistiisa.
Al-shabaabka Baardheere oo Go’aano adag ka soo saarey Ganacsiga Qaadka iyo Cunistiisa.
Print here| By: allgedo.com: Saturday, January 26, 2013 // 1 Jawaab
Xarakada Alshabaab ee Maamusha degmada Baardheere ee Gobolka Gedo ayaa go’aankii ugu dambeeyey ka qaadatay Ka ganacsiga Qaadka iyo Cunistiisa oo ay horey u mamnuucaan, inkastoo Bilahii ugu dambeeyey Qaadku uu si Qarsoodi ah ku soo galayey degmada, iyadoo ay jiraan dad loo xirey iyo Gaadiid weli u xiran.
Wararka laga helayo degmada Baardheere ayaa waxaa ay sheegayaan in Maalinimadii shaley isku soo bax ka dhacay Fagaraha Cakaaro ee Bartamaha Magaalada oo ay ka hadleen Mas’uuliyiin ka tirsan Xarakada Alshabaab oo uu ka mid yahay Macalin Daa’uud Maxamed Gaarane oo ah Madaxa Dacwada iyo Tacliinta Alshabaab ee Gobolka Gedo ayaa waxay sheegeen labo maalin ka dib Gaarigii lagu qabto isagoo Qaad sida in meel fagaaro ah lagu gubayo Gaariga iyo Qaadka saaran.
Sidoo kalena Qofkii lagu Qabta Qaadka isagoo Cunaya ama ka Ganacsanaya in uu muteysataysan doono Xarig mudo 30 maalin ah oo uu ku xirnaan doono Saldhiga Degmada iyo Masaafurin ah in magaalada looga saaro magaalooyin kale, taasina waxay dhibaato ku tahay sida ay noo sheegen dadka deegaanka ah,dadkii ku tiirsanaa Ganacsiga Qaadka.
Inkastoo Qaadku uu ka mid yahay Waxyaabaha Maanka dooriye, balse tan iyo Burburkii soomaaliya waxaa ka ganacsigiisu ku tiirsanaa Boqolaal Qoys oo u badan Haween, kuwaasi oo nolol maalmeedkoodu ay ku xiran tahay Ganacsiga Qaadka.
1 Jawaab " Al-shabaabka Baardheere oo Go’aano adag ka soo saarey Ganacsiga Qaadka iyo Cunistiisa. "
Maxamed Cali Ciise says:
http://www.walaalayaal waa arin nagu cusub Gaadiid la gubayo iyo dad la masaafurinaayo eeboow na bad baadi,masaakiintan muruq ku noolka ah waad u jeedaa Xaaladooda